TELEPONANA | RayHaber | raillynews
Emergency Medicine Association ny Torkia avy Erciyes in Kayseri mba hamorona fanentanana manohitra avalanches Nature Medicine miasa Group natao Fanofanana ny Trainers. Ny mpitsabo momba ny vonjy taitra sy ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana amin'ny fiofanana izay natao tao amin'ny Kayseri Erciyes Mountain [More ...]
Erciyes, izay manintona olona be dia be avy any an-toerana sy any ivelany miaraka amin'ny alàlan'ny làlan-kaleha sy fitaovam-panabeazana misy azy amin'izao tontolo izao, dia mitondra hetsika samihafa isan-kerinandro. Erciyes A.Ş., mpiasan'ny kaominina ao Kayseri Metropolitan. by Kayseri Ticaret [More ...]
Denizli Ski Center, izay napetraky ny Kaominin'i Metropolitan Denizli mba hananana ambara ao amin'ny fizahan-tany ririnina ao an-tanàna dia nampitombo ny fahalianana hilomano. Amin'ity vanim-potoana ity, Denizli dia nametraka ekipa ski niaraka tamin'ny atleta 25 nahazo lalana. [More ...]
Ny fampianarana ski maimaimpoana ao amin'ny kaominina Kartepe dia nanomboka fiofanana. Omena talata sy alakamisy ataon'ireo mpanazatra fanatanjahantena monisipaly ao amin'ny vovonana an-tampony ao Kartepe Ski Center ny fiofanana. Ny taranja ski dia nokarakaraina maimaim-poana isan-taona azon'ny kaominin'i Kartepe. [More ...]
Ny ben'ny tanàna Trabzon Metropolitan Murat Zorluoğlu dia nanao fanambaram-peo momba ny tariby izay haorina ao Sümela. Trabzon Zorluoğl Murat no ben'ny tanàna ao Qatar Airlines Sales Manager for Torkia sy izao rehetra izao Ökmen [More ...]
Bursa Teleferik AŞ dia nanambara fa hanomboka amin'ny 14.30 indray ny sidina rehefa miverina amin'ny laoniny ny rivotra. Ny fiara misy tariby, izay manome fitaterana hafa eo anelanelan'ny afovoan-tanànan'i Bursa sy Uludag, dia tsy azo hatsangana manomboka ny maraina, vokatry ny fihenan'ny rivotra. [More ...]
Ny sasany amin'ireo dia an-tsambo any Bursa Sea Buses '(BUDO) androany dia nofoanana noho ny toetr'andro. Nesorina koa ny sidina nomanin'i Bursa Teleferik ankehitriny. Raha ny fanambarana natao tao amin'ny tranokalan'ny BUDO, dia ny famantaranandro [More ...]
Ireo mpandresy tamin'ny fifaninanana zazavavy Carton natao tao anatin'ny faritry ny Fetin'ny Ririnina Uludağ, nokarakaraina fahefatra tamin'ity taona ity dia nomen'ny Bursa Metropolitan Munisipaly. Loka ho an'ny toerana voalohany sy faharoa ary fahatelo amin'ny vondrona 2 samihafa, Metropolitan [More ...]
Ordu Metropolitan Municipality, izay mpisava lalana ny tetikasa izay hitondra vina mankany an-tanàna, dia mamolavola ny «Atatürk Park Sea Star» eo amin'ny faritra eo anelanelan'ny trano fisakafoanana Midi sy ny Teleferik'i Teleferik hahafahana mahasoa kokoa ny morontsiraka. [More ...]
SAMULAŞ A.Ş., izay mahafeno ny filàn'ny fitaterana an'i Samsun, dia manaitra ireo taranaka ho avy ihany koa. Tao anatin'ny faritra misy ny tetik'asa fanabeazana, mpianatra 13 no nomena fiofanana azo ampiharina ao amin'ny sekoly 600. Tetikasa "Famoronana Hoavy ho avy" ao amin'ny SAMULAŞ A.Ş. [More ...]
Ny Filan-kevitry ny tanànan'i Afyonkarahisar dia nanao ny fivoriana tamin'ny volana febroary. Ny ben'ny tanàna Mehmet Zeybek, izay nanao kabary fanokafana ny fihaonana dia naneho famindram-po tamin'ireo miaramila maty izay vokatry ny fanafihana notanterahin'ireo singa an'ny fitondrana tao Idlip, ho an'ny havantsika sy ny firenentsika. [More ...]